Mba hamahana olana sasany dia tsy ampy ny fandalinana lalina. Indraindray dia mora kokoa ny mitazona hevi-dalina ao anaty fisainana mahery vaika kokoa noho ny eny amin'ny habakabaka. Amin'ity tranga ity dia azo ekena ny fampiasana ny teknika momba ny fitsaboana, ny tanjon'izy ireo dia ny hahitanao vahaolana haingana.
Ny fototry ny fomba fitsaboana amin'ny atidoha dia fiaraha-miombon'antoka amin'ny hevitra, indraindray na dia ny mahatalanjona indrindra aza. Mba hanaovana izany, ny mpandray anjara tsirairay dia tokony haneho safidy maro araka izay azo atao, ary ny fanandramana mahomby indrindra dia avy amin'ny fanadihadiana lalina kokoa. Ny fampitomboan-kevitra dia mitovitovy amin'ny lalao, ary noho izany, hevitra izay mahazatra amin'ny mahazatra, noho io teknika io, dia mamorona sy mahomby.
Ny mpamorona ny fomba fitsaboana nentim-paharazana dia Alex Osborne, izay nandroso ny hevi-baovao izay matetika tsy mahazatra fa ny hevitra vaovao dia nalevina noho ny tahotra ny tsy fankasitrahana, ny fanesoana ary ny fanomezan-tsiny ny mpiara-miasa na ny mpiambina. Izany no mahatonga ny foto-kevitra momba ny atidoha ho fisalasalana tsy mifototra amin'ny fanombanana ny hevitra eo amin'ny dingam-pitenenany, ary ny tena mahomby indrindra dia ny fanadihadiana lalindalina kokoa.
Amin'ny voalohany, ny eritreritra rehetra dia miorina amin'ny hoe manana zo hanana fiainana, raha ny fampiasana teknika ny fitsaboana amin'ny saina, ny isa, fa tsy ny hatsaran'ny hevitra, no zava-dehibe voalohany. Ary avy eo dia miova ny fanovana.
Ny fahombiazan'ny fitsaboana amin'ny atidoha
Ny fahombiazan'ny fomba fitsaboana amin'ny atidoha dia voamarina amin'ny alalan'ny fianarana samihafa. Ankoatra izany, na dia eo aza ny fehezan-dalàna mifehy fa io fomba fiasa io dia mety ho an'ny olona manana tetik'asa famoronana, dia azo ampiasaina amin'ny sehatra rehetra ny fitaovam-pianarana amin'ny sehatra rehetra rehefa ilaina ny vahaolana mahomby amin'ny asa sarotra. Ny iray hafa amin'ny fomba fitsaboana - ny fitsaboana dia ahafahantsika mamory ny vondrona, mampitombo ny fitiavan-tenan'ny mpiasa tsirairay, izay hahatsapa ny maha-zava-dehibe ny heviny. Amin'ny hoavy, ny teknolojia fampiasa amin'ny atidoha dia azo ampiasaina ho toy ny fanatanjahana hamahana ireo asa tsy misy dikany.
Famolavolana ny olana. Tena zava-dehibe ny manamboatra asa iray izay mitaky vahaolana haingana, mba hahafahan'ny tsirairay manatratra tanjona iray ihany. Amin'io dingana io ihany, ireo mpandray anjara sy mpandrindra dia voafidy;
Ny tanjon'ny hevitra dia ny dingana lehibe, mandritra ny fotoana hanehoan'ireo mpandray anjara ny safidy farafahakeliny indrindra amin'ny famahana ny olana noforonina. Ilaina ny mamaritra ny fotoana ho an'ity sehatra ity, amin'ny ankapobeny, ampy ny ora fianarana;
Fifidianana sy fanombanana ny hevitra nambara. Tena manan-danja tokoa io ampahany io fa tsy ny endrik'ilay teo aloha. Ankehitriny, ireo mpandray anjara, mpandamina sy mpanamory dia mila manangona mba hanombantombana ny fahombiazan'ny safidy natolotra.
Ankoatra ny fomba fanabeazam-pandinihana klasika, maro ireo karazany ao aminy:
tsosialy. Mifanohitra amin'ny fitsaboana nentim-paharazana, ny maha-zava-dehibe an'io fomba io dia ny mpandray anjara tsirairay manoratra ny heviny, ary avy eo manome azy ireo hijery. Ampiasaina amin'ny toe-javatra izay tsy ahafahana mamory ekipa amin'ny fotoana iray;
brainstorming. Amin'ity tranga ity, mizara roa ny mpihaino. Ny mpandray anjara sasany dia mametraka fanontaniana na mamorona hevitra, ary Ny vondrona faharoa dia tokony handinika ny fanapahan-kevitra ho tonga ary hamaly fanontaniana;
jiolahy. Ny tanjon'ny fivoaran'ny atidoha dia ny hamantatra ny tsy fahombiazan'ny rafitra misy. Tahaka ny hevitra, ny tsikera dia tsy voafetra. Amin'ny fametrahana ny olana dia misy ny andraikitra manokana.
Zava-dehibe ny tsy hampivelatra ny fivoaran'ny saina amin'ny fivoriana mahazatra na mipetraka miaraka amin'ny anekotoa. Mba hanaovana izany, mandamina tanteraka ny fotoana ary misafidy mpitarika mahay, afaka mitondra ny resaka amin'ny làlana marina.
Zon'ny vehivavy bevohoka miasa
Ahoana ny hiditra ao Oxford?
Drafitra momba ny asa eo amin'ny orinasa - fitsipika fototra sy risika
Ahoana no hamonjena amin'ny sakafo?
Ahoana ny fomba hahatonga azy ho mpanazatra amin'ny fitafy avy amin'ny scratch?
Fandefasana toerana hafa
Fanomezana ho an'ny mpiara-miasa
Ny mpitarika eo amin'ny sehatra dia fomba iray hitantanana ekipa iray
Ny hazo avo indrindra eto an-tany
Sakafo ho an'ny batisan-tsakafo sy sauna
Ahoana no fanaovana sary?
Dress-shirt amin'ny tranom-borona iray
Fitafy lava miaraka amin'ny fihintsanana amin'ny tongotra
Ahoana no hahatongavana any amin'ny Vatican?
Ahoana ny fomba hanamboarana azy?
Famaboana mandritra ny fitondrana vohoka - inona no tokony hatao?
Nihaona tamin'ny sary nandritra ny vanim-potoana iray ihany i Neny sy ireo zandriny kintana!
Ahoana no hamaritra ny firaisana ara-nofo eo amin'ny vavony?
Ny volo dia 50 taona
Jared Leto sy Oscar-2016
Ahoana ny fifandraisana amin'ny lehilahy iray eo am-pandriana?